Izay handeha Hitsena Vehivavy Shinoa
Noho izany, te daty Shinoa zazavavy, huh. Izay mba handeha Hihaona Vehivavy Shinoa. Tsy azo antoka ny fomba mandeha momba ny fivoriana iray. Tsy toy ny sarotra, toy ny mety hieritreritra ianao. Arak’izany, misy fomba hihaona tsara tarehy ny vehivavy Shinoa tao amin’ny faritra an-toerana. Aoka ny ny manopy maso ny sasany amin’ireo fomba tsara indrindra mba handeha momba ny fivoriana ny sasany amin’ireo vahiny ireo vehivavy ao anatin’ny fotoana fohy lavitra ny an-trano an-tanàna. SAFIDY IRAY: Daty ny Shina Airlines mpanompo. Ny fotoana manaraka dia mandeha mampiasa ny China Airlines ary rehefa niditra ny fiaramanidina ho azo antoka ianao dia hampivelatra ny fifandraisana amin’ny mpiandraikitra ilay fiaramanidina. Indray mandeha aho dia mitondra ny datin ny Singapore Airlines stewardess (izy no tsara TAREHY.) izay nihaona tao amin’ny hotely iray izay ny fiaramanidina ny mpanamory dia lavaka, rehefa takiana mba hijanona nandritra ny alina. Mitady ny trano fandraisam-bahiny izay ireo fiaramanidina ireo hijanona rehefa ilaina izany mba handany ny alina ao an-tanàna. SAFIDY ROA: Grad an-Tsekoly. Maro ny Shinoa mpianatra hanatrika ny USA Oniversite sy handray anjara ao amin’ny fandaharana nahazo diplaoma ho injeniera sy ny siansa. Atsaharo ny anjerimanontolo eo an-toerana (tsy ny Fiaraha-monina amin’ny Oniversite.) ary handray ny manisa ny rehetra ny tovovavy Shinoa nanenjika ny PhD amin’ny Rindrambaiko Injeniera, na Mpikaroka. SAFIDY TELO: Ny Aterineto. Ity no tena hita fa fomba dia mitaky ny endrika sasany mandeha amin’ny fotoana iray.
Shina ny Fitiavana toy ny mety tranonkala hijery ny hifandray amin’ny vehivavy Shinoa. Ataovy ao an-tsaina fa maro ny vehivavy avy any Shina, dia tsy ho afaka miteny malagasy, ka tsy MAINTSY ho manam-paharetana amin’ny azy ireo.
SAFIDY EFATRA: Chinatown
Isaky ny tanàna lehibe manana»Chinatown»izay vehivavy Shinoa izay efa miaina ao amin’ny USA nandritra ny fotoana mety ho hita. Miezaka ny trano fisakafoanana sy ny trano fandihizana ao anatin’ny ireo Chinatown distrika ireo dia ho lonaka ny faritany ho anao. Maro ny vehivavy avy any Shina no tena tsara tarehy, mahaliana sy tena mifantoka amin’ny asa sy ny fianakaviany. Mety ho tena sambatra ny manana Shinoa vehivavy iray mizara ny fiainana
← Mampalahelo ny fahamarinana momba ny mampiaraka ao Shanghai Jays izao Tontolo izao
Izay handeha Hitsena Vehivavy Shinoa →